China folding Hot Tent Stove Ye Camping Mugadziri uye Mutengesi | Ndarama yegoridhe
Saizi: 51.2x42.5x41.8 cm (isina mapaipi)
Kurema: 9.5 makirogiramu
Hot Tende Chitofu Tsananguro
Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd tarisa mukugadzira inopisa tende chitofu uye mamwe musasa zvitofu zvitofu kwemakore gumi nemashanu muChina. Kuenderera mberi kuunzwa kwemidziyo mitsva uye tekinoroji, ine tarenda rakanakisa rekuvandudza nekutsvaga. Tinogona kupa ODM, OEM sevhisi.
Yedu Folding Hot Tent Stove Ye Camping yakanyatsogadzirwa mu304 simbi isina chinhu inogara yakasimba, inobata kupisa kwakanyanya mushe, uye haizombo ngura kana kukora, ichigadzira ichi chakanakisa huni chinopisa chekukembera chakanakira kushandiswa munzvimbo dzakaomarara dzekunze. Hove yekupisa kwechitofu inotengesa inosanganisira 1 chitofu muviri, zvikamu zvitanhatu zve60 mm dhayamita chimney pombi, 1 spark arrestor, 1 inobviswa kabati uye 1 ash scraper. Senge sekubika munzvimbo diki dzekuvaraidza dzakadai sevasheni matende matende, canvas bhero matende, yurts, sheds, echando hove dzimba, dzimba diki, mabhazi kutendeuka nezvimwe. Chitofu chesimbi isina simbi chakanakira kudziyisa nekubika munzvimbo diki.
Hot Tende Stove Details
Chigadzirwa Chigadzirwa: 51.2x42.5x41.8cm (isina mapaipi)
Kukura kweKatoni: 48.2x25x35.5cm
Kurema: NW: 9.5KG GW: 11.5KG
Chimney dhayamita: 60 mm
Zvirongwa Zvekuwedzera: Zvekuwedzera zvekushandisa zvekubika, tinokurudzira spark arrestor, flue damper, tangi remvura, kitini chinopenya uye bonde risingadziviri moto. Zvinhu izvi zvinokubatsira kuburitsa flue gasi, kukuita kuti ubve padambudziko remweya weflue, kudzivirira marashi kubva pakuputika achikonzeresa njodzi dzekuchengetedza uye kuve rakanakisa kunyungudika chando nechando chemvura yekunwa, uye kana chitofu chiri kupisa zvakanaka tangi rinobika mvura mukati maminetsi nekuda kwenzvimbo yaro kuseri kwechikafu chepamusoro uye hwaro hwepombi yeflue panopisa kupisa.
Kupeta Kunopisa Tende Chitofu Kune Camping Mifananidzo
Pashure: Lightweight Camping Stainless Wood chitofu Tende
Zvadaro: 45 Degrees Canvas Tende Chitofu Jack
Kupeta Musasa Wood Chitofu
Tende Rinopisa Wood Chitofu
Lightweight Camping chitofu
Tende Wood Inopisa Chitofu
Matanda Anopisa Tende
Tende Wood Inopisa Chitofu, Camping Stove Mvura Tangi, Stainless simbi chitofu, Musasa Wood Burner, Kunze Kwehuni Kunopisa, Bindu Kubika Chitofu,